Nhengo dzeWOZA Dzinorohwa neMapurisa Dzichiratidzira muHarare
Nhengo dzesangano rinorwira kodzero dzemadzimai dze Women of Zimbabwe Arise, WOZA, dzinodarika mazana matatu dzarohwa zvakaomarara neChipiri nemapurisa padzanga dzichiratidzira dzichirangarira zuva re Valentine’s Day pamwe nekucherechedza kusvitsa makore gumi kubva parakavambwa.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reWOZA, Amai Jenni Williams, vanoti kuratidzira kwavo kwanga kwakanangana nekusvitsa makore gumi sangano ravo ravambwa nhengo dzesangano ravo dzichingoshungurudzwa nemapurisa chete uye kodzero dzemadzimai dzichiramba dzichityorwa.
Imwe nhengo yeWOZA yanga iri pakati pevaratidziri ava, Amai Magodonga Mahlangu, vatiwo chishuwo chesangano ravo ndechekuti paitwe sarudzo dziri pachena mushure mekunge bumbiro remitemo yenyika idzva rapedza kunyorwa.
Amai Mahlangu vakurudzira hurumende ye South Africa inove mutongigava pagakava remuZimbabwe kuti iwone kuti kodzero dzevanhu munyika dzakosheswa.
Pasvika varatidziri ava pamusuwo wedare reparamende apo pavasiya vamwaya mapepa nekugovera veruzhinji maruva senzira yekucherechedza zuva rezverudo, mapurisa anga akapakatira zvombo atanga kuzvindikita varatidziri ava zvaita kuti varatidziri ava vaite rutsoka ndibereke vachiita aziva kwake aziva kwake.
Kuzvindikitwa kwaitwa vanhu nemapurisa kwakonzera kuti sangano reWOZA ritadze kusvitsa gwaro renhuna dzavo kudare reparamende.
Mutori wenhau dzemifananidzo anoshanda akazvimirira, Andrison Manyere, uyo anga achitora mifananidzo yevanhu vanga vachirohwa ava, abva asungwa nemapurisa ari pakati pekuita basa rake.
Manyere aendeswa kukamba yemapurisa ye Harare Central asi pataenda pamhepo tanga tisati taziva kuti mutori wenhau uyu apomerwa mhosva ipi.
Sangano reWOZA rakavambwa muna 2002 nemadzimai maviri eku Bulawyo anoti Amai Williams pamwe namushakabvu Amai Sheba Dube nechinangwa chekurwira kodzero dzemadzimai.
Kubva panguva iyi, nhengo dzeWOZA dzanga dzichiratidzira nguva nenguva pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzemadzimai uye musi wa 14 Kukadzi gore rega-rega apo panocherechedzwa zuva re Valentine's Day pasi rose, nhengo idzi dzinopinda mumigwagwa dzichicherechedza zuva iri.